DEG DEG: Somaliland oo Shabaab iskaga dhigtay Puntland kana qabsatay deegaano muhiim ah - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Somaliland oo Shabaab iskaga dhigtay Puntland kana qabsatay deegaano muhiim ah
Jun 10, 2019 - Comments off
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalamayaal katirsan Al- Shabaab oo maalin ka hor la wareegay deegaanka Af Urur ee gobalka Sanaag, ka dib markii ay halkaas ciidamadii Puntland ee kusugnaa ka guureen, una baxeen dhinaca laamiga dheer ee kasoo baxa magaalada Boosaso.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo la xariirta arrimaha bixitaanka ciidamada ilaa hadda, balse xogo laga helay deegaanadaas ayaa sheegaya in sababaha bixitaanka ay ka dambeysay, ka dib markii ay ciidamadaas diideen amaro uga yimi taliyaashooda.
Warar kale ayaa sheegaya in xagga mushaaraadka cabasho ah ay uga baxeen deegaanka Af Urur oo muhiim u ah difaacyada ciidamada Puntland ee kusugan buuraleyda gobalka Barri.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo si deg deg ah ku gaaray Boosaaso, ayaa wararku sheegayaan in uu halkaas u tagay sidii wax looga qaban lahaa arrimahan, dibna ciidamada ugu laaban lahaayeen saldhigyadoodii.
Mid kamid ah dadka deegaanka Af Urur ayaa sheegay in dad hubeysan ay soo galen magaalada, oo ay calan madow ka taageen Saldhigi ay ka baxeen ciidamada Puntland, ka dibna ay dib uga laabteen, isagoo sheegay in aysan jirin cid si buuxda u joogta magaalada.
Warar kale ayaa xaqiijinaya in ay maleeshiyaadka Shabaab kusugan yihiin goobo aan wax badan u jirin magaalada Af Urur, taas oo keentay ijn ay wali dadku ka cabsanayaan in ay baabuurta ku safraan.
Af Urur waxaa horey u qabsaday Al- Shabaab, waxayna ka geysteen weerarkii ugu badnaa ee dhimasho soo gaarta ciidamada Puntland, waxaana ku dhintay in ka badan 40 Askari oo katirsanaa ciidamada Daraawiishta ee dawladda Puntland kal hore.